UMengameli wase-Tanzania wendele kobabomkhulu | Scrolla Izindaba
UMengameli wase-Tanzania wendele kobabomkhulu
Kushone uMengameli wase-Tanzania, uJohn Magufuli.
IPhini likaMengameli uSamia Suluhu Hassan ukuqinisekisile ukushona kwakhe kumabonakude wombuso ngoLwesithathu ebusuku.
Ngokusemthethweni, uMagufuli ubulawe yizinkinga zenhliziyo esibhedlela e-Dar es Salaam.
Kepha bekunokungabazeka okuncane kubo bonke ngaphandle komlomo osemthethweni kahulumeni wokuthi ubulawe yizinkinga ezihlobene ne-Covid-19. Kwasekubikwe kakhulu emasontweni ukuthi ungenwe yilesi sifo.
Uzoba yinhloko yombuso yokuqala ukubulawa yileli gciwane.
Kuyisiphetho esihlekisayo. Ngokuningi kwalolu bhubhane, uMagufuli ubeyiphika i-Covid. Umemezele ukuthi lelizwe belingenagciwane ngoNhlangulana odlule, yize bekukhona ubufakazi obanele. Wanciphisa izifonyo nokuqhela kwezenhlalo, kwathi ngoNhlolanja uhulumeni wathi azikho izinhlelo zokukhishwa komuthi wokugoma.
Isikhundla sikaMugafuli se-Covid kube yisahluko sakamuva esihlalweni sobuMengameli esinempikiswano enkulu. Uqale ngonyaka wezi-2015 ezenza isitayela somuntu ongahambisani nombhedo futhi olwa nenkohlakalo. Kepha waqala ukuzimela futhi wabangisana, wavumela abezokuphepha ukuthi basebenzise amaqhinga acindezelayo ezweni lonke – ikakhulukazi abaphikisi.
Kuze kube sekushoneni kwakhe, abavikeli bakhe abathembekile kuhulumeni bathi wayephila kahle. Mhla ziyi-12 kuNdasa, i-Al Jazeera icaphune uNdunankulu uKassim Majaliwa egxeka imibiko ngokugula kukaMagufuli kubantu base-Tanzania “abanenzondo” abahlala phesheya.
“Abantu base-Tanzania kufanele babe nokuthula. UMengameli wenu ukhona, unempilo, usebenza kanzima. Ukusabalalisa amahlebezi okuthi uyagula kuwumphumela wenzondo nje,” kusho uMajaliwa.
IPhini likaMengameli uHassan uthe kuzoba nezinsuku eziyi-14 zokulila kuzwelonke futhi amafulegi azobe esendiza.
Abantu base-Tanzania okwamanje bazobe bebheke ukudluliswa kwamandla ngokushesha.
Engxoxweni abenayo nabakwa-Scrolla.Africa, isitha esifungelwe sikaMagufuli, umholi ophikisayo owadingiswa wase-Tanzania uTundu Lissu – owasinda ngowezi-2017 wasinda emanxebeni ayi-16 ezandleni zombulali okukholakala ukuthi wayethunywe uhulumeni kaMagufuli – kucaphuna umbhali waseMelika uMark Twain.
“Angikaze ngifisele umuntu ukufa, kodwa ngifunde imilando kamufi ethile ngokujabula okukhulu.”
Sithinte ku-[email protected]ca